सुदूरपश्चिममा सत्ता परिवर्तनको कसरत, मुख्यमन्त्रीमा रावलको चर्चा
काठमाडौं। नेकपा एमाले विभाजन भएपछि सुदूरपश्चिममा सरकार परिवर्तनको कसरत अघि बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। माधव नेपाल पक्षसँगको छलफलपछि सम्भवतः सुदूरपश्चिममा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ।
काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ। माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबिच दुई/दुई प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्ने छ। चार दलीय गठबन्धनमा बन्ने प्रदेश सरकारको नेतृत्व काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रण बहादुर रावलले निश्चित भएको छ। माओवादीका तर्फबाट हाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका त्रिलोचन भट्ट भदौ महिनाभित्र मुख्यमन्त्री पदबाट हट्ने गठबन्धन स्रोतले बतायो।
नेपाली काँग्रेस संसदीय नेता रावलले पनि सरकार गठनका लागि छलफल सुरु गरिसकेका छन्। पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने रावलले बताए। सुदूरपश्चिममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, नेपाली काँग्रेसका १२ र जसपाका २ गरी तीन दलकै सरकार बन्न बहुमत पुग्ने छ। त्यस्तै, प्रदेशसभामा माधव नेपाल समूहको पकड बलियो छ। यद्यपि नेपाल समूहमा रहेका नेता भीम रावलले साथ नदिएपछि भने अन्योल देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा रावलको प्रभाव राम्रो छ। रावलले लिने निर्णयले प्रदेशसभा प्रभावित हुने आंकलन छ।
यद्यपि अब बन्ने सरकारमा काँग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सहभागी हुनेछन्। सरकार बनाउन गठबन्धनलाई पूर्ण बहुमत छ। माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुनेहरूको नेतृत्व बीरमान चौधरीले गर्ने चर्चा छ। चौधरी अहिलेसम्म पद र अवसरबाट वञ्चित छन्। अहिलेसम्म नेपाल समूहमा आबद्ध हुने सांसदहरूको संख्या भने यकिन भइसकेको छैन।
प्रदेश १ र ३ मा नेपाल नेतृत्वको पार्टी, प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने चार दलीय गठबन्धनको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिममा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउन लागेको हो।
डोटीका ६ पालिकामा एकीकृत समाजवादीले पायो पूर्णता, को-को आए नेतृत्वमा ?
कांग्रेसको सुदूरपश्चिम सभापतिमा बलायर निर्वाचित